दुर्घटनाप्रति गम्भीर बनौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / दुर्घटनाप्रति गम्भीर बनौं
दुर्घटनाप्रति गम्भीर बनौं
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय October 9, 2018	0 117 Views
चाडपर्व नजिकिदै गर्दा के ही गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना भएका छन् । हालै दाङ र बाँके मा लगातार भएका गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना हुन् । दाङबाट बाँके जान थाले को गाडी दुर्घटनामा दाङका पाँच जनासहित छजनाको ज्यान गएकै भो लिपल्ट घो राहीको मुटु मानिने शहीदगे ट नजिकको सडकमा निकै दर्दनाक दुर्घटना भएको छ । दुई मो टरसाइकल ठो क्किएर एक पै दल यात्रु महिलालाई उछिट्याएको र रो किएको ट्याक्टरमा पछारिदा ट्याक्टरमा राखिएका सरिया उनको शरीरमा बिझ्न पुगे  । यति दर्दनाक घटना भयो कि ग्रीलको सहायताले सरियाको बाँकी भाग काटे र शरीरमा रो पिएका तीनवटा सरिया बो के र अस् पताल लै जानुप¥यो  । अस् पताल लै जाने कथा झन गम्भीर बनिदियो  । दाङको अस् पतालमा यति जटिल के सको उपचार सम्भव थिएन नै , भै रहवामा पनि चिकित्सकले आँट गरे नन् । दाङबाट भै रहवा गाडीमा पु¥याइयो भने भै हरहवा अस् पतालमा के ही समय गुजारे र पुनः गाडीमै काठमाडौ ं पु¥याइयो  । त्यहाँ पनि निजी अस् पतालले आँट गरे नन् । घाइते लाई शल्यक्रिया हुने शिक्षण अस् पतालसम्म पु¥याउन साढे २४ घण्टा पर्खनुप¥यो  ।
तीनवटा फलामका सरियाले शरीर छे ड्ने स् िथति आउनु निकै दर्दनाक दुर्घटना हो  । यति गम्भीर घाइते साढे २४ घण्टापछि मात्रै अस् पतालमा पुग्नु अझ बढी संवे दनशील विषय हो  । सरकारका लागि यो घटना निकै सो चनीय विषय हो  । ने पालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आएको छ । तीन तहका सरकार बने का छन् । अझ भनिएको छ– सिंहदरवार जनताको घरआँगनमा आएको छ । बिडम्बना, एकजना बिपन्न दलित महिला गम्भीर दुर्घटनामा पर्दा उनको उद्धारका लागि कुनै पनि तहका सरकारको ध्यान जाँदै न । सामान्य काँडा भिजे को कति पीडा हुन्छ भने तीनवटा त्यति ठूला फलामका सरिया शरीरमा बो क्नु त्रासदीपूर्ण सास् ती हो  । धे रै का लागि हे र्नसमे त नसकिने यो दृश्यको पीडा एकजना नागरिकले भो ग्दा त्यो दे शको सरकार गम्भीर हुनुपर्छ कि पदैर् न ? मानौ ं, त्यही घटनामा कुनै राजनीतिक दलका ने ता कार्यकर्ता परे को भए निश्चय नै सरकार गम्भीर हुँदो हो  । सत्तासँग पहुँच राख्ने वा आर्थिक अवस् था सवल भएको व्यक्ति दुर्घटनामा परे को भए तत्काल हे लिको प्टरबाट उद्धार गरे र सुविधासम्पन्न अस् पतालमा पु¥याइन्थ्यो  । दे शभित्र नभए बाहिर लगिन्थ्यो  । ठूला ने ताहरु सामान्य बिरामी हुँदा र दे शभित्रै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि विदे शमा उपचार गराउन जान्छन् । तर एउटा विपन्न नागरिकले यति त्रासदीपूर्ण घटना ब्यहो र्दा राज्य गम्भीर हुने कि नहुने ?
घो राहीको दुर्घटनाले धे रै पक्षको ध्यान खो लिदिएको हुनुपर्छ र खो ल्नुपर्छ । पहिलो कुरा त, घो राही पश्चिम ने पालकै व्यवस् िथत शहरमा पर्दछ । हामीले प्रदे श राजधानीको रुपमा अपे क्षा गरे को शहर हो यो  । त्यसो त यसलाई स् मार्ट शहर बनाउने परिकल्पना पनि हराइसके को छै न । यस् तो शहर बन्नका लागि कम्तिमा सडकको ट्राफिक व्यवस् थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ । पै दल यात्रुका लागि छुट्टै हि“ड्ने बाटो नहुँदासम्म स् मार्ट शहरको परिकल्पना दिवा सपना मात्र हुन्छ । बजार क्षे त्रको धुलो , धुवा त सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि कम हो ला भन्ने आशा गरौ ं । तर ट्राफिक ब्यवस् थापन एकाएक रो किने हो इन । गाडी र पै दल हि“ड्ने यात्रुको सडक एउटै छ । सडकमा गरिएको जथाभावी पार्किङ गम्भीर दुर्घटनाको आमन्त्रण हो भन्ने जसले पनि अनुमान गर्न सक्छ । सडकमा क्षमताभन्दा बढीका गाडी गुडे का छन् ।
सानो क्षमताका ट्याक्टरमा लामालामा सरिया सडकमा लतादैर् बो किएको भे टिन्छ । धुलो धुवा“ उडाउने सिमे न्टका बो रा पनि खाली नै राखिएको हुन्छ । यस् ता सामग्री कम्तिमा बन्द ट्रकभित्र राख्ने हो भने पनि के ही सहजता आउन सक्छ । मुख्य कुरा घो राही मात्र हो इन, जुनसुकै बजार क्षे त्रमा पनि पै दल यात्रु र गाडी हिड्ने सडक एउटै हुनुहुुुँदै न । पै दल यात्रुका लागि एक मिटर मात्र भए पनि सुरक्षित ले न बनाइनु अत्यावश्यक छ । त्यस्तै बजारमा जथाभावी पार्किङलाई तत्काल रो क लगाउनुपर्छ । यति दर्दनाक दुर्घटनाले पनि सरो कारवालाहरुको ध्यान खिचे न भने बुझ्नुपर्छ ती निकाय अझ ठूलो दुर्घटनाको पर्खाइमा छन् । अहिले बजार क्षे त्र व्यवस् थापनको जिम्मा स् थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकारले प्रहरीको सहयो गमा बजार व्यवस् थापन प्रभावकारी नबनाए अझ खराब स् िथतिका दुर्घटना हुनसक्छन् । त्यसै ले सरको कारवालाहरु बे लै मा गम्भीर बन्न जरुरी छ । हामी नागरिक पनि सचे त हुँदै सरो कारवाला निकायलाई दबाब दिनु आवश्यक छ ता कि कसै को पनि जीवन बर्बाद नहो स् ।
Previous: प्रशंसात्मक खोजसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्मेलन
Next: वेष्ट दाङ सिंगिङ एण्ड डान्सिङमा अब २० जना